भिम आचार्यले मुख्यमन्त्रीका रूपमा फोटो टाङ्ने रहर पूरा गर्नुभयोः राजेन्द्र राई « Rara Pati
भिम आचार्यले मुख्यमन्त्रीका रूपमा फोटो टाङ्ने रहर पूरा गर्नुभयोः राजेन्द्र राई
११ भदौ, विराटनगर। प्रदेश नं. १ का प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले भिम आचार्यले मुख्यमन्त्रीको रहर मात्र पूरा भएको बताएका छन्। राईले मुख्यमन्त्रीको रुपमा आचार्यले फोटो टाङ्ने रहर मात्र पूरा गरेको बताएका हुन्।
नेकपा एमाले विभाजन भई माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको पक्षमा रहेका राईले भनेका छन्, ‘प्रदेश नं. १ मा भिम आचर्यले मुख्यमन्त्रीको रहर पूरा गर्नुभयो । फोटो टाङ्ने काम भयो। केहीदिन भित्रै सरकार अल्पमतमा पर्छ। उहाँ केही दिनको पाउना मात्र हो ।’
नेता राई गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको मुख्य दावेदार पनि हुन्। हाल प्रदेश १ मा नेकपा (एमाले)को एकल सरकार रहेकाले ४ सांसद मात्र नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पक्षमा लागेभने एमालेको सरकार अल्पमतमा पर्छ।
प्रदेश १ मा बिहीवार मात्र शेरधन राईले मुख्यमन्त्री बाट राजिनामा दिएर भिम आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। आचार्यले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।